nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị?
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #614
Ana m eziga ozi a iji mara nke add-ons ị kacha achọ ka emelite gị, dịka m na-aga imelite mmadụ ole na ole, ị ga-enyere m aka nke ukwuu ịchọpụta nke ị kacha achọ.
Na site ụzọ, ma ọ bụrụ na i nwere ike nye m ihe njikọ emelitere version (site ọzọ website) ọ ga-adị mma.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, Jodsalz1, Bubble @ atụrụ
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #615
OK nke mbụ, ụfọdụ njehie ...
A320 mega Pack, na-anọgide na-akụ afọ n'ala. Ọ bụ ejighị n'aka na m FSX, amaghị ihe kpatara ya.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD na-adịghị egosi ma uloanumaanu na overspeed ... na niile.
Ugbo elu ndi Emirates, nke di ezigbo FPS, dara FSX...
Ekwe Omume mmelite ...
Ọfọn, ọ ga-akpali mmasị n'ụzọ ụfọdụ jikota A330 / 340 site tr, na A320 Mega Pack, kpọmkwem ka jikota kokpiiti nke bụ magburu onwe.
A380, otu ihe, PFD na-adịghị egosi ma uloanumaanu na overspeed.
Ọ bụrụ na m na-echeta ihe ọzọ, m ga-etinye ya ebe a.
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #616
Dariussssss, nke ahụ bụ ihe niile a dị mfe fix !!!
1) Iwepụ gị Airbus ugbo elu;
2) Hichapụ ihe ọ bụla Airbus
3) Dochie ya Boeing
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: denpic
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #617
Ọ ga-amasị m ịhụ Boeing 757 nwere ezigbo VC oge ụfọdụ n'ọdịnihu. Echere m na 757 ewepụla FSX mara mma.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Bubble @ atụrụ
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #619
D115 dere: Ọ ga-amasị m ịhụ Boeing 757 nke nwere ezigbo VC mara mma n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu. Echere m na 757 ewepụla FSX mara mma.
Ọ BỤRỤ na ị na-na na njikere imefu $, na Quality Nku 757 bụ pụtara ezigbo
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 4 izu gara aga #649
N'ihi na ụfọdụ nke ụgbọ elu-eme ka ndị engines atụ ogho n'ihi na ọ dị nnọọ anya otú njọ mgbe ha na-agaghị na-atụgharị #realism
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 izu gara aga #669
Dị ka ọtụtụ emelitere P3D4 dika o kwere omume, yana VC zuru oke.
Ma melite na v4 na A320 na B737-800 ka anya dị ka akwụkwọ na-atọ ......
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 izu gara aga #671
M ga - ahụ VC mma maka Airbus A400M. Ozokwa, ọ bụrụ na onye edemede ahụ nwere ike ịnye ntụziaka iji mee ka ọ ghara inwe aka zuru oke n'ala, nke ahụ ga-adị egwu. Ọ na-agbahapụ HARD, enweghịkwa m ike (na amaghị m) chọta ụzọ m ga-esi kpochapụ ngwá ọrụ ndị a n'oge tagzi.
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 izu gara aga #673
na Boeing 777 pls maka P3D v3 / v4
Full arụ ọrụ VC panel plss ...
nke add-ons ị ga-achọ ka emelitere gị? 3 afọ 1 izu gara aga #674
Gauges ogwe, n'ezie VC nke 380 si
Oge ike page: 0.343 sekọnd